Rivo-doza tahaka izao - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Rivo-doza tahaka izao - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA
RIVO-DOZA TAHAKA IZAO
Tonkalo fampidirana :
Efa mba nilokakoka aho
Fa hanoratra tantara
Ho an’I BERONONONTSIKA;
Dia ataoko izany anio !
Niara –niari –pijaliana
Teo an –tany fiadiako :
Niasa tamin’ny fo madio !
Izay vita dia tantara
Fa na dia ny taranako aza
Tsy maintsy hamelako soratra
Haneho ny zavatra tsy fantany :
“Fa efa nisy ,hono, i FENO
Nisy i MIANDRISOA SY LOVA;
Izy telolahy ireo
Niady ho an’ny Tanindrazany…
Efa mba niroso isika
Hanavotra an’i BERONONO
Tao anaty tevan –dalina,
Ka nilatsaka hofidiana
Nefa niantrana amam – basy
Tamin’izay rafozan – jamba
Tsy nahalala ny aman –taona
Maty ho an’i BERONONO”
Indray fahavaratra tamin’izay, nifanindry indrindra tamin’ny fivoriana ara – potoana voalohany tsy maintsy novonjeko ny fidiran’i ELITA teto Madagasikara. Vao fafifafin –dranon’erika no nametahako sarotro niala tao an – trano, niaraka tamin’ny entan –kely efa fantatra mialoha fa tsy maintsy ho hotsaka tao am – babena noho ny tsy fisian’ny fiarovana azy; ny halaviran –dalana hodiavina anefa mbola an –kezaka ihany , raha zato kilaometatra hifampitolomana amin’ny kapokapoky ny fiara hitrongy revom –potaka, ary efapolo kilaometatra tsy maintsy handehanana an –tongotra, fa tsy mba tongan’ny fiara, na fahavaratra, na maintany.
Mpanolotsain’ny Tanàna aho teo, ary i Dada no Lefitry ny Filoha Mpanatanteraka
-	Ka hiverina ihany izany ise raha sanatria tsy mahita fiara ? Hoy ireo efa fantatro fa te-hanajanona ahy, noho ny faharatsian’ny toetr’andro.
-	Rehefa miala eto aho dia tsy mipody intsony raha tsy efa vita izay anton –javatra niantsoana ahy hivory.
-	Ka handeha an –tongotra amin’iny lalan –davitra be iny ve hovitan’ise ?
-	Rehefa tiako ny Tanindrazako dia tokony ho foiko ho azy koa na ny tenako, na ny heriko. Ka inona moa no antony tsy ahasahiako raha mby amin’ny vaninandrom –pitolomako izao ? Efa nanolo –tena ho an’ny vahoaka anie aho e !
-	Izao indray àry e ! Raha mba voahidin’ny lalana tapaka any moa ise dia mba ahoana? Sady tsy an –tany no tsy am –parafara : tsy i Dada hamonjy any, tsy i Neny hanavotra. Mety ho tavela any anebaneban –tany any mantsy ny fiara raha tena mijojo ny orana, dia tsy maintsy mandry an –tsaha fa sao mitera –doza.
-	Kely aina loatra isika ankehitriny raha miohatra amin’ireo tia tanindrazana taloha : fa inona no naha –mena lamba ny MENALAMBA e ? –Tsy ny fandriana an –tsaha ? Ary inona no nanoloran –dry TRIMOFOLOALINA ny tenany hatao sorona tao ANATIROVA ? – Tsy ny fitiavany ny Tanindrazany ? Nefa isika ankehitriny : matahotra, reraka, be fanahiana; Tena tsy sahy maty mihitsy e! Tsy maintsy ho resy ambony ampanga ihany isika raha haverina hatramin’ny voalohany ny tolom –panafahana rehetra nisy teto Madagasikara : ny fito ambiefapolo sy sivinjato sy arivo, ny roa ambinifitopolo, ny iraika ambinisivifolo. Efa mba nahakasika ny zoron –dambantsika anie ny tolona ho amin’ny fitakiana ny FAHAMARINANA tamin’ny roa sy roarivo e ! Nefa mbola firifiry akory no nihatakataka sy nialangalana ? Dia toy izao fanaontsika izao ihany : mitady tany malemy hanorenam –pangady !
-	Ka inona àry no tokony hatao fa atoadro ny andro e ?
-	Ny volako hampiana raha misy hanampiana azy, dia aleo aho handeha, fa sao dia hilaozan –dry zalahy eo.
-	Ity àry handehanan’ise any Analamahitsy e ! Dia ireto hanampio ny sakafo sy izay mety hilàna vola any an –dalana any. Ka tsy ho tratrako eto intsony izany ise rehefa mirava avy miasa hariva aho ?
-	Tsy ho tratran’ise intsony aho fa ity ny fanalahidy , dia ao ny trano.
Namotaka izay tsy izy ny lalana rehetra nodiavina: na arabe, na elakelan –trano.
-	Ao ! Ambatomainty, Amboditsiry, Analamahitsy e ! Izay maimaika ao ! Hoy ilay tovolahy arafarafan’ny fiara mitondra azy avy any ambony any.
Nosakanako ny Mpamily ary nijanona somary dila iray metatra kely nisongona ahy; vao tafakatra aho dia nisosa mora ihany ny kodiarana ary mamerimberina ny antsony im –polokely eo ilay tovolahy avo feo.
-	Ambatomainty, Amboditsiry, Analamahitsy e ! Tonga dia lasa ! Ao ! Analamahitsy, izay maimaika ao e !
Nanopy maso akaiky sy alavitra ilay tovolahy, fa tsy nisy avy nanatona intsony, nojerin’Ingahy Mpamily tamin’ilay fitaratra kely ankaviany miraikitra amin’ny vatan’ny fiara ny tany aoriany, dia nitehina tsimoramora ny ivon’arabe ny loha-fiarany , ary lasa tanteraka izahay.
-	Ka isika ity anie , hono, toa ohatry ny mbola tsy ho lasa androany r’Ingahy Mpanolotsaina e !
-	Ka mbola tsisy fiara ko !
-	Dia lasa aiza ry Dada ?
-	Mbola nandeha niresaka fiara any izy. Asa izy izay na nahita na ahoana !?
-	Ka izao ve moa ho lasa intsony fa dia efa rahampitso izany !
-	Sady ny orana ity tsy misy fiatoany !
-	Mandreraka mihitsy !!!
-	Ka hiara –hatory aminay eto Analamahitsy izany ianao androany sa…?
-	Ny entako no hajaniko eto aminareo dia mba hampidiro any anaty fiara, fa eny TALATA VOLONONDRY aho no miandry anareo rahampitso maraina be.
-	Ka sao dia tara any ianao fa zava –dehibe anie ity hovonjentsika ity e !
-	Izaho no ho tonga alohanareo eny , fa aza matahotra e !
-	Dia aiza ianao izany no handry androany ?
-	Hamonjy kely any ANTANAMBAO Antsinanan’i TALATA aho fa misy namako hotsidihako any.
-	Ry LALAINA ?
-	Izy mihitsy ! Any ry zareo no mipetraka.
Navelako teo ny entana, ary tsy nitondra afa-tsy izay ankanjo teny an –koditro aho, ny sarotro moa efa tsy nialàko rahateo fa aron’orana mpahatonga any amin’ny farany.
Nisakana fiara teo amin’ny sampanan’ i MASOMANGA aho ny ampitso maraina, ary namonjy teny TALATA. Niandry ny fahatongavan’izy rehetra fotsiny dia nandray ny fiara nianavaratra. Vao nanomboka teo AVARATSENA, dia efa nalama izay tsy izy ny lalana : fotaka tsy fotaka ! lavaka tsy lavaka ! Ny orana amin’izany, vao mainka mijojo sy niha –nivatravatra.
Tsy nisoka –bava mihitsy aho teo am –piaingàna fa nihaino sy nitsantsika tsara izay karazan –dresaka nanalàn’ny rehetra lalana.
-	Ka nanao ahoana ity raharahanareo tao BERONONO tao ? Hoy ilay Ramatoa be, niantso an’Ingahirainy !
-	Resaka hadalàna anie ireny e ! Tsipaky ny miala aina ranona a!
-	Tsy ilay taloha ihany ve ity nitory sa olona hafa e ?
-	Olona hafa no tompon’ny fitoriana, fa iza moa no ao ambadika e?
-	Tena mba tsy menatra olona ihany izy kah ! Inona no mbola isisihako amin’io ? Matoa ianao tsy lanim –bahoaka intsony dia efa ratsy izany ny vitanao teo ! nefa mbola mitetika ny ho kala be ihany !
-	Sady ny toerana ihany koa ifandimbiasana e !
-	Izy kosa angaha nihevitra ny hionona mandrakizay ao ko !?
-	Ny hadalàny !- Jereo izao Ilaikely ity ! Hoy Ingahirainay, sady nanondro ahy; Izy izao mba isan’ireo mpifaninana nilatsaka hofidiana ho Ben’ny Tanàna, niaraka tamin’ireo, saingy rehefa tsy lany izy dia nipetraka fa tsy nanagam –bovona ohatr’izao.
-	Izay koa no fahendrena e ! Hoy ilay Ramatoabe, sady nikapokapoka ny soroko izy. Dia notohizany ihany ny resaka.
-	Ka nanao ahoana ny fandehahan’ity tribonaly ?
-	Zavatra nilamina ho azy ! Ilay izy tsy hoe : vato nalaina nanamboaran –trano ho an’ny Ben’ny Tanàna, na nananganam –pasana, fa nosamborina hanaovan’ny Fokontany Sekoly ho azy, sady mbola haverina fa tsy hoe any dia tsy hita.
-	Dia izany avy no hita nitoriana olona ?
-	Ianao angaha ahoana ?- Efa nataony izay lalana rehetra naminganana azy fa tsy voany, dia izay sisa no noheveriny fa hamandrihana azy, kanjo, niala maina koa !
-	Dia menatr’olona haika izy izao ! namono biby tsy nahafaty mantsy !
-	Izany no alehany rehefa tery saina e ! Mba olona efa nasandratry ny vahoaka ny tena, dia tokony hanaja izay voninahitra izay, fa tsy handrovi –tsihy ohatr’izao.
-	Dia ahoana hoy ity Mpitory, nivoaka avy tany amin’ny Tribonaly ?
-	Tsy nahajery olona ranona a! izany no tena hoe : “tsy nahajery olona !”. Izay zavatra nanontaniana azy tany anie ka tsy nisy fantany e !Nanontaniana ny isan’ny vato : tsy fantany ! Ny kaomitin’ny rano : iray amin’ireo vavolombelona folo mahery ireo no mba fantany.
-	Iza io ?
-	I Dadan’Ilaikely ity !- Ny vato efa voaverina, efa nahazoanay fanamarinana avy amin’ny Fokonolona, tsy fantany koa izany; nanontaniana izy raha nahazo taratasy fanomezan –dalana amin’ny maha – “solon –tenam-pokonolona” azy.
-	Dia nisy ?
-	Inona fa tsy ny tanany folo no nentiny tany amin’ny Fitsaràna. Tsisy Fokonolona naniraka azy izany akory anie e! Sady tamin’ny fotoana namakiana ny va	ton’ny rano dia ireny mihitsy no isan’ny tsy nandray andraikitra tao. Angaha izy manana anjara amin’izany vato izany, na dia iray hitorahana akoho aza !?
-	Fa dia inona fotsiny ?
-	Angady mondro nasesiky ny zarany e! Tsy maintsy mitomboka fa an –tanan’olona.
-	Loza ko ! Hoy ilay Ramatoabe, sady nanamboatra ny ondany , namonjy nandry ilika indray izy, Ingahirainy nihaino ny akoralavan’ny vatan –dehilahy niady lalana fa nihitsoka ny fiara nitondra anay.
-	Avoahay leiretsy ilay apombo amin’ny gony ao a ! Dia hadio tsara aloha hiala ny fotaka vao rarahana tany maina. Tsitsitsitsio ihany ny ampombo fa sao tsy ampy mpahatonga any AMBATOMANOINA.
-	Ary ilay angady lava lela vao novidiana moa aiza e ? Hoy ilay Mpanampy ny Mpamily, efa mihoso –potaka hatrany an –tampon –doha ka hatrany am-paladia; Ny akanjony amin’izany efa azo aholana fa ny erika tsy mbola hary nisy fisavàny , hatramin’ny nialàna tany Antananarivo.
-	Ka ialahy isany ihany anie no nanao azy e! Ario tsara leity fa hiady fotaka amin’ny tanana aty anie ialahy isany e!
Nitrena ny fiara ka nitrena, nikisaka ka nibolisatra, fa adim –pamatranandro roa angamba vao nahafaka elanelana kely tra –toraka. Ny lalana miha –ratsy hatrany, ny orana manampy trotraka; latsaka tanteraka tao anatin’ny harefonana izahay, nefa mbola tany anebaneban –tany alavitra tany. Tsy maintsy mbola handingana ora maromaro ihany koa vao ho tody ao SADABE, izay tanàna antenain –kandriana sy mba hahitàn –tsakafo atoandro. Eo am –panaronana izany rehetra izany dia mandeha daholo ny hatsanga tsy aman’orana rehetra.
-	Ampidino ilay Ben’ny Tanàna tanora ao hanao lalana fa misy Ben’ny Tanàna tanora ao e ! Hoy Ilay Mpamily anankiray, Mpamazivazy ahy hatramin’ny fahazazako.
-	Iza ity Ben’ny Tanàna tanora ao ? Hoy ireo maro lahy, reko mifanadina ao amin’ny vatan’ny fiara ao.
-	Misy Ben’ny Tanàna tanora ao fa manamaro isa ny Beantitra ao fotsiny !
-	Ary ianao ity lazainy hoe : “Ben’ny Tanàna tanora ?” Hoy ilay avy Miaramila nifanila toerana tamiko, fa gony moa no lafika nipetrahanay tao anatin’ilay fiara fitondràna entana, no sady nisintona ny vavan –gony hisondrotra ho any amin’ny hatony izy.
-	Izaho mihitsy no antsoantsoany eo !
Ny tena marina dia tsy hoe miraviravy tanana aho, na tsy te –handray ravin –dena, fa ny asa ampiasana hery be loatra no efa tsy vitako hatramin’izay, ka naneren’i Dada sy Mama ahy, hilofo mafy tamin’ny fianarana. Adikan’ny olona ho fialangalanana izany indraindray , ka efa saika niteraka fifampiandaniana matetika teo amin’ny fiainako. Amin’ny zavatra vitako sy tratry ny heriko, dia tsy mba fombako ny miamboho adidy, fa amin’ny lafiny sasantsasany toy itony kosa dia tsy mba matin –kenamaso aho, fa dia misonenika am –pitoerana fotsiny.
Voatery nidina ihany anefa nony farany, fa nihilana be loatra nankany aminay ny fandrin’ny fiara, nefa sendra ny toerana am –panariana indrindra.
Rivo –doza tahaka izao indrindra koa, tadidiko tsara fa vao telo ambinifolo taona monja aho tamin’izay ! Samy manana ny fijeriny ny olona, fa izay no rivo –doza noheveriko fa nahery indrindra teto Madagasikara, hatramin’ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo, ka hatramin’ny taona efatra sy roarivo : i GERALDA ! Tsy nahazo kitay hataina intsony izahay tamin’izany , fa baoritra no nampirehetina; Ary tao anivon’ny rivo –doza mihitsy no lany ny vatsinay. Mpianatra nandrato fahaizana tao Ambatomanoina aho tamin’izay, ary efatra mianadahy izahay no iray tampo. Nandrasana izay hitsahatra fa tsy nitsahatra, nandrasana izay hisava, fa mainka koa nangila –potsy ny habakabaka.
Saika tapaka daholo ny ankamaroan’ny lalana teto Madagasikara, ary ny Madagasikara fantatro tamin’izany, dia tsy nisy afa-tsy AMBATOMANOINA, AMBOHIBARY, BERONONO. Nihantona ny fifamoivoizana noho izany, ka tsy nisy azo nifandraisana fa samy nihidy tamin’izay nisy azy tany.
I BERONONO no anaran’ny tanànanay , sy mbola onenan’ny Ray aman –dReniko hatramin’izao.
Tapa –kevitra izahay fa hody haka vatsy, na ho orana, na ho rivotra no hanjo any an –dalana any, fa efa sendra izay tsinay tsy mba vatsy sy ny kibo tsy mba lamosina. Roalahy izahay fa nanaiky niaraka tamiko ny zanak’i Dadatoa tao atsimonay. I Mavolava no renirano voalohany hitsakàna raha vao ho any; jerena izy amin’izany ka efa manopy mena sy mivalombalona ohatra ireny hitelina ireny ihany. Teo izahay, niaka –nidina erak’iny moron –drano iny. Alentika any anaty rano ny ilan –tongotra, dia sintonina indray fa tsy tanty ny heriny. Namonjy teny ambany amin’ny fitsakàna indray fa sao mba hisy olona hita ihany, nefa tsy nahita afa-tsy raotra sy kidaon –drano isan –karazany izahay. Tapahina ny bararata izay hevrina fa mafonjafonja sy lava indrindra, dia iny no entina mitsapa rano : alentika iny dia manaraka azy moramora arakaraky ny halalin’ny rano. Efa ho adiny efatra nivezivezena teo izahay mirahalahy ka namonjy nitombina teo ambony fasika noho ny havizanana be loatra.
Nisy haram –bato hitako tany ambony tany, ka nantsoiko ilay rahalahiko mba hiara –mikaon –doha amin’izay mety hahafahana, ary tena lasa tokoa izahay; kanjo, tonga teny amin’ny antsasa –drano dia tsisy tohiny intsony ilay haram –bato , fa fasi –polaka no nandimby tao, ary onja mahery no nivalombalona teo amboniny. Voatondro iray no tsy nanosika anay mirahalahy ho lavo tamin’ny fahafatesana, fa raha latsaka tao izahay dia tsy tafapongatra intsony , raha tsy natsingevan’ny rano tamin’ny vatana efa tsy misy aina intsony. Niverina teny imorona indray izahay avy eo, rehefa nontanin’ny fahatairana saika ho sorona. Nosintoniko hilentika tsara tamin’ny lohako ny gony jiafira nataoko sarotro, ary nanapahako besofina teo akaiky teo ny kilaoty kely ‘ndeha hoentiko hitsàka ka nofatorako mafy tamin’ny valahako. Lokin’ny hehy I Zandrikely, fa fombanay rehefa hihanika rotra mantsy iny fihetsika nataoko iny : Atao somary lavalava ny akanjo anaovana, dia fatorana amin’ny tady ny valahana, ary rehefa avy tangosana amin’ny tahony ny rotra dia araraka avy eo amin’ny vavan’akanjo, ary tsy very intsony fa mitangorina sy mivangogo eo amin’ny kibo eo fotsiny. Moa va tsy iny bevohoka iny mihitsy ianao ?!
-	Eleo asiako vavarany ity tady ity dia mba mora tsoahina rehefa eny am –pita ! Hoy aho nakahery an’i Zandry, fa efa hitako nanomboka ho kivy I Ledala.
-	F’angaha ianao mbola manantena ho afaka amin’io rano io ihany ?
-	Any BERONONO isika anio no mandry fa aza matahotra I Zandry e !
-	Ka hamono tena izany ? nefa vao teo no saika maty !
-	Mivavaha mafy fotsiny e ! I Betsiboka aza anie “tondraka sasakalina fa ritra maneno akoho e !”
Fankaherezana fe- fankaherezana fotsiny no nitenenako izany, fa ny rano nanoloana toa hitako miha –misondrotra, miha –misondrotra ihany; Efa saika nanafotra ny morona mihitsy aza.
-	Misaotra an’Andriamanitra Lehibe ! Hoy i Zandry nihiaka tampoka.
-	Fa misy inona ? Hoy aho nifantoka tampoka teny aminy.
-	Tsy hitanao ?
-	Fa inona e ?
-	Tena tsy hitanao mihitsy ve ?
-	Tsy mahatazana n’inona n’inona aho marina e !
-	Hitanao irony avy irony ? Misy olona anankiroa miloloha entana amin’ny gony ireny, handeha hitsàka eto.
-	Eny tokoa ! Hoy aho tsy nahatàna ny hafaliako fa nitsinjatsinjaka tsy nisy ohatr’izany.
-	Avotra ihany ! Avotra ihany ! Avotra ihany ! Hoy ny tsinjerinay mirahalahy mandra –pahitàn’ ireo olona anay avy ery am –pita.
Iny tokoa fa nametraka ny entana teny an-dohany avy izy mianaka, dia namatototra ny patalohany teny an –tendany avy. Sikim –ponitra kely sisa no hany nentiny nitsàka. Nampakatra ny entany ho eny an –dohany avy indray dia nandroso nitsapatsapa tao anaty rano: Ilay lehilahy lehibe no avy any ambony fa izany no fomban’ny fitsakàna amin’ny fahatondrahan –drano tahaka izao, ary ny kely kosa tantanany sady manarak’onja avy eo ambany. Jereko ny fandehany amin’izany ka miakatra, miakatra ihany, fa tsy mba midina mihitsy: izany mantsy no atao hoe : “manohi –drano”. Tsapako ho tena mamikitra mafy an –drainy ilay zaza fa entin –tahotra ihany koa angamba, nefa odian’ilay lehilahy lehibe tsy taitra fa mihorika, mihorika ihany. Farany dia tafita tery ambonimbony kelin’ny toerana niandrasanay azy izy mianaka.
-	Ary manakaiza ianareo roalahy izany ?
-	‘Ndeha hody any BERONONO izahay, fa tsy afa –drano !
-	Dia ahoana ?
-	Saika hiangavy anao hampita anay raha mety, fa efa hatramin’ny maraina izahay izao no teto nefa tsy sahy nita.
-	Ary mba mahatokitoky koa anie ny Ray aman –dReninareo izany mamela anareo hitsakatsaka anaty rivo –doza tahaka izao e!
-	Tsy izany fa mpianatra lany vatsy mantsy izahay , dia tsy maintsy mody fa ny any efa tsy tafakatra.
Tafita soa aman –tsara izahay, ary nisaotsaotra ilay rangahy !
-	Rehefa mandalo dia mba miviliana fa io vao miditra ny tanàna io mihitsy ny tranonay
-	Hay ve ianareo zanak’ilay olona ao e ? Ilay rangahy ohatry ny fohifohy iny ?
-	Dadanay iny ! Hoy aho nitsatsaingoka.
-	Ka vao avy nadoko ny tranonareo tany aho anie tamin’ny herinandro e !
-	Hay ! Misaotra betsaka.
Nifanao veloma izahay dia nanohy ny diany. Izahay mirahalahy, faly fa afa – doza, kanefa mbola misy renirano iray koa tsy maintsy hosedraina. Faly sahirana ihany teny am –pandehanana satria eto vao tena ho voahidy raha sanatrian’izany ka hisy izay tsy fahafahana, fa tena ho “ tra –drano Anosy” amin’izay, satria anelanelan’ny renirano roa izahay roalahy teo.
Ny tohin’i Mavolava no renirano faharoa sady farany sisa hitsakàna mialohan’ny hihazoana ny arabe mody mankany an –tanàna.
Rivo –doza tahaka izao koa no efa saika tsy nahafan –dry zoky teo fahiny raha tsy maromaro lahy izy, ary sendra izay madidi-doha nitarika vao sahy nanao “mita be tsy lanin’ny mamba” teo.
Moramora taminay indray anefa ny nitsàka teo, noho io rano io be velarana sy tsy dia nahery loatra. Izahay mirahalahy ihany dia nahafaka azy. Ranon’erika tsy an – kijanona no nanalanay izany rehetra izany.
Somary nitsahatra kely ny orana raha tafakatra teo an –tampon’Ambatonosy izahay, nanantena fa hahazo arabe amin’izay mpahatonga any BERONONO; kanjo , loza fa saron’ny rano avokoa ny lalana rehetra tamin’iny ambody tendrombohitra iny : tapaka tanteraka ny lalana ary tsy nisy azo naleha intsony. Safomorona mantsy i Mananara ary nihoatra baiboho araka ny fiteny amin’ny fatondrahan –drano tahaka izao.
-	Dia inona no hataontsika : hiverina hody any Ambatomanoina sa hijanona hatory eto Ambatonosy ? Hoy i Zandry hitako ho kivy dia kivy.
-	Tsy maintsy miroso hody any BERONONO isika na handady aza.
-	Ka aiza ny ho lalana ?
-	Hihanika tendrombohitra isika, hitety havoana mpahatonga any TSENAMATY, fa any tsy misy rano intsony sady efa alavitra an’ i Mananara.
-	Ka raha sendra tevan –dalina tsy afaka any dia ahoana ?
-	Dia hatao izay hahafahana ko ! Isika anie handeha haka vatsy e !
Teo no vanim –potoana voalohany tamin’ny fiainako, nahatsapako ho nitelemako ny ny nangidy indrindra sy nahatsapako ny tolona nataoko samirery. Nahagaga ahy ny nahitako izay hevitra hihanika tendrombohitra sy hitety havaona nefa tsy mbola hary natrehako ny tahako izao.
Henjana dia henjana ny lalao, fa tena nandady araka ny voalazako tokoa : tevana ny havia sy ny havanana, lalankely tokana no manasaraka azy, ary izay no tsy maintsy nadehanana nefa sady ety no nalama ohatry ny savony. Jerijerena izay misy vato, dia ampamikirina amin’iny ny rantsan –tongotra , ary ny tanana mamikitra amin’izay bozaka tsy dia lavitra eo. Ny fihetsika amin’izany tandremana tsara , fa raha vao diso maherihery sisina kely fotsiny , dia na very miankavia, na mihintsana miankavanana ka samy atelin’ny tevana .
Nanomboka nikija indray ny orana, saingy tsy ranon’erika ohatra ilay teo intsony fa tena oram – batravatra nahafotsy maso mihitsy; Ny famikiram –bozaka sy vato amin’izany ohatr’ireny dinta ireny.
Efa mba nisy ampaham –potoana nianarako ady ihany teo amin’ny fiainako, fa tsy nanam –po ho sendra zavatra tahaka izao mihitsy aho. Ny lesona nampianarina ahy dia ny hoe: Raha avy atsy ny fahavalo, dia avy eto ianao, ary raha ohatr’izao ny fihetsiky ny fahavalo dia ohatra izao kosa no mba hitsenanao azy „. Efa natoro ahy hatramin’ireo teboteboka mahafaty aza, saingy ny hiady amin’Olombelona no nanofanana ahy fa tsy ny hiady amin’ny natiora.
Reraka izahay indraindray dia mitombina maka aina, ary mitsangan –tsy fidiny dia manohy ny dia indray avy eo. Ohatra izany hatrany ny adinay sy i Zandry mandra –pigadona teo ambany lavarangana ka nahataitra an’i Mama nahatazana anay.
-	Fa misy maty sa misy marary ?
-	Tsisy maninona ka ! Fa ahoana ?
-	Dia tena efa mamono tena mihitsy mantsy ianareo fa tsy maty a ! Ny Olon –dehibe aza mihenahena fotsiny aty fa hoe tsisy lalana
-	Manao ahoana aloha i Mama fa aza tonga dia masiaka e ?
-	Salama tsara ! Manao ahoana ianareo ?
-	Salama be daholo ! Dia manao ahoana koa i Dada ?
-	Salama tsara izy ! Jereo fa ao an –trano lehibe ao izy angamba – Fa inona ity hodianareo anaty rivo –doza e ?
-	Mitady loza e ! Hoy i Zandry nampihomehy anay telo mianaka. Dia tena samy nihomehy tokoa.
-	Tsy izany fa lany vatsy izahay dia tsy maintsy nody fa efa tsy hita intsony izay ho raisina.
-	Nefa tsy mahazo miverina any intsony ianareo raha tsy efa tsaratsara ny andro ! mampieritreritra anay aty fotsiny !
-	Ka ahoana ilay ankizy any ?
-	Tsisy fianakaviana hahavita hijery azy fotsiny eo e!
-	Dia inona no vaovao ankoatr’izay ry Mama ?
-	Fa angaha mbola tsy fantatrareo ?
-	Inona ?
-	Maty anie i Maman –dry IANTSO e !
-	Inona ? Maman –dry IANTSO ?
-	Maty omaly hariva izy ! Ny mpaka an –dry IANTSO any Ambatomanoina aza izay tsy efa hiverina ?!
Teo aho vao ankona tanteraka ! Toy ny vato be amam –polopolo kilao nazera ny foko ny fandrenesana an’IANTSO idonam –pahoriana tahaka izao; IANTSO : zaza niara –nilalao tamiko, mitovitovy taona sy mitovitovy fihetsika izahay, ary tsy mbola nifankafoy na tamin’ny soa, na tamin’ny ratsy. Nisy ditraditra kely madinidinika aza nifankahazaranay, ary efa nahatratrarana anay matetika, nefa vao mainka niha –nivoatra hatrany ny fanafenanay ireny.
Hahita an’IANTSO aho izany izao : hahita azy hitomany sy ho ankonankon’ny alahelo; Fantatro fa mangidy aminy ny fandaozan’ny reny malalany azy , nefa tsy afa –manoatra noho izany izahay.
Tsy lefy ato an –tsaiko mandrakizao ny fomba nidiran’IANTSO ny tanàna tamin’iny takariva iny : niondrika izy sady nilanjalanja tanana, fa tsy nahajery ireo vahoaka be nanotrona ny fahalasanan –dreniny. Tsy hitan’IANTSO akory aza fa nagata-maso saika mba hampionona azy aho, nefa tsy nitodika na tamin’iza, na tamin’iza izy mandra –pigadony ny varavarana nandrian’ny maty.
Ny feon’IANTSO no niavaka indrindra tamin’ireo gogogogon’ankizy maro nihohoka teo anatrehan’ilay vata – mangatsiakan’ity reniny, tsy nisafidy ny handao azy, fa lasan’ny fanendrena.
Izany no nahatonga ny saiko ho lasa alavitra teo am –pijoroana teo, mandra –pahafaky ny fiara hanohy indray ny dianay mandra –pahazo ny tanàna handriana sy hisakafoanana.
Lasa alavitra ny saiko nieritreritra zavatra maro, ka nahatongavako tany amin’ny hoe:“Rivo –doza tahaka izao no nahalasanan’ny Maman –dry IANTSO ! Rivo –doza tahaka izao, no nianjeran’ny trano lehibe iray ka nahafaty ny dadan –dry Ianona, nahatoro ny zanak’Ianona „ . Fa rivo –doza tahaka izao, tadidiko tsara, nahitàko tovovavy iray tsy nanan –kialofana fa nivihivihin’ny hatsiaka teo ambany lavarangan’ny karana : onena azy aho tamin’izay, ka nanatona moramora nila dinika taminy
-	Diso mangatsiaka loatra ianao ka sao dia harary amin’izao ?
-	Maniry hafanana tokoa aho, tompoko, saingy tsy afa –manoatra !
-	Isan’ireto tra –boina ireto izany ianao ?
-	Tra –boina efa hatramin’ny ela aho : mbola kely, hono, aho no nilaozan’ny Raiko ka nipetraka irery tamin’ny Reniko; vao folo taona aho anefa dia nanambady indray i Neny, ary tsy zakan’ny vadiny aho ka noroahany handeha. I Neny koa moa tsy afaka niaro ahy, fa jamban’ny fitiavan’ilay vady vao. Niasa tamin’olona no nataoko taorian’izay, ary rivo –doza tahaka izao indrindra no nahatongavan’ny fianakaviana naka ahy sady nilaza fa “maty i Neny !”, maty niaraka tamin’ilay vadiny vaovao : maty niajeran’ny trano izy roa. Tsy navelan’izy ireo niverina tamin’ny asako intsony anefa aho taorian’ny fandevenana, fa notazoniny hanampy azy, hono. Tsy dia nampiasaina firy aho tamin’ny voalohany, fa isan’ny notambatambazina mihitsy; Kanjo nony tato aoriana, tsy zakako intsony fa sahy nibaiko ahy hatramin’ny zazakely vao folo taona aza. Ka dia izao hitanao mitsoaka aty izao.
-	Mampalahelo ahy ny tantaranao ! tena mahonena ! fa,hono, ho aho !
-	Ahoana izay ?
-	Tsy mampaninona anao ve raha homeko hanaovanao ity akanjo mafàna ety amiko ity?
-	Raha sitrakao ! kanefa sao dia lasa ho ianao indray no mangatsiaka ?
-	Tsy mampaninona ahy raha androany fotsiny aho no mangatsiaka ! Afaka manao akanjo mafàna indray aho rehefa tonga any an –trano.
Notsoahako ny akanjo teny an –koditro dia natafiko azy, natsofony ny tanany, dia nidiany tsara , ary napetany koa ny satrok’ilay akanjo ka nafatony ireo tadikely roa nikirazorazo nanaraka azy.
-	Efa mba maheno mafàna ve ianao ry… Iza moa ny anaranao aloha , azafady e ?
-	IALISOA no anarako, fa IALY no tiako hiantsoanao ahy !
-	Ry IALY !
-	Vao manomboka mahazo hafanana ny tarehiko sy ny lamosiko, fa ny tongotro sisa.
-	Mbola tiako homena sakafo ihany koa mantsy ianao, satria fantatro fa rivotra fotsiny mameno ny vatanao any, vokatry ny hatsiaka be loatra, ary tsy mampaninona ahy ny mba mividy kapa na kiraro iray raha izay no mba hampafàna anao, ka hahatsapanao hasambarana toy ny olon –drehetra. Ka mazoto ve IALY ?
-	Mazoto tokoa aho satria tena ao anatin’ny harefonana tanteraka; kanefa manahy aho fa sao dia diso mananararaotra anao be loatra ?
-	Izaho anie no manome fa tsy ianao no mangataka e ! Andao àry raha mazoto ianao e !
Namonjy trano fisakafoanana aloha izahay : nihinana sy nisotro. Ny zavatra nahalasa saina ahy dia ny fahatsapàko an’IALY, milaza ho noana izy nefa toa tsy nahatelina firy nony mby teo am –pihinanana. Tsy haiko na menatra ahy izy, na ny vavoniny mihitsy no nihidy, fa vetivety dia nijanona izy.
-	Izay sahady ? Hoy aho nipitrapitra nijery azy.
-	Tena mbola tsy mahalatsan –kanina mihitsy aho !
-	Ary sao dia mba misy zavatra tianao sotroina ry IALY ?
-	Inona moa no mba fisotroko ?
-	Asa… ohatra hoe : ranom –boasary, ranon –garàna, Fanta, Coca…, misy daholo ireo !
-	Ranon’ampango angamba no tiako hosotroina, raha misy ato.
-	Be dia be raha izany !Andraso vetivety fa angatahako ianao ! – Mba omeo ranon’ampango anie azafady e! Hoy aho niantso ilay tovovavy nanolotra sakafo anay.
Vetivety foana dia iny ny zinga sy ny vera nentiny avy any; Nampidinako rano tamin’ny vera IALY, ary natolotro azy.
-	Io àry dia mahereza misotro fa tena mbola reraka be anie ianao izany e!
-	Izay ihany anie e! Hoy izy nony avy nampakatra indray mandeha monja.
-	IALY a ! Tsy marary ve ianao ?
-	Fa ahona no mahatonga anao miteny izany ?
-	Ka ity ianao toa sady mailain –komana no malain –kisotro !
-	Malaina fotsiny aho angamba ! Mbola hazoto ihany aho amin’ny manaraka !
-	Ka andao indray àry hizaha kiraro ho anao e !
Naloako ny vola dia nivoaka moramora izahay sy IALY, izaho mandeha eo aloha dia arahiny moramora avy eo aoriana. Dia nifantina izay kiraro mba tiany sy mahafinaritra ny sainy teo izy.
-	Ary itsy angaha tsy tianao ry IALY ? Hoy aho nanondro irony lamaody ankehitriny irony.
-	Tiako io fa lafo be loatra.
-	Ka tsy resaka hoe: “lafo be” na “mora kely” anie, fa ny hoe “tianao” sa “tsy tianao” e!
-	Tiako io ka ! Nefa io koa ve dia ho azo tenaina ? Kiraro fitondra mianjaika anie ireny e!
-	Dia mitadiva iray koa hotenainao e ! Aza mihafahafa izany ho‚aho !
-	Ka vola daholo anie izany e!
-	Fa vola izany angaha misy dikany ry IALY a ! natao holaniana anie ireny e ! Ho an’ny sasany ny vola mety hireharehàna, ho an’ny sasany mety hanaovana tsinotsinona ny hafa; Fa ho antsika ny vola, natao hifanampiana.
-	Te –hisaotra anao be dia be lavitra noho izay fisaorana rehetra tononina ety ambany masoandro aho. Kanefa mbola mahazo mangataka zavatra iray aminao ve aho ?
-	Inona izay ry IALY ?
-	Ny anaranao ! Mba tiako ho fantatra ! mba tiako hotononina; tiako ho vita sikotra ato anatiko ny endrikao sy ny anaranao, fa nanao soa be loatra tamiko ianao.
Nentiko nitanila kely nivoaka ny tranombarotra IALY, dia namonjy tao ambadiky ny varavarana izahay vao namaly azy aho. Namahàko bokotra iray ny akanjoko, vao nasehoko azy.
-	Hitanao io amin’ny foto –tendako io ? Misy sary fo efa voajanahary hatramin’izay io. Io no porofo famantaranao ahy. Ny anarana mantsy tanim –boanjo, ka mety ho betsaka no toa ahy, fa io , tsy misy manana mihitsy io.
-	Kanefa rehefa mba te –hiantso anao aho dia hataoko hoe : “iza?
-	“SEDY”, hoe!
-	Misaotra anao be dia ba aho ry Sedy a ! tsy ho voavaliko ny vitanao tamiko na dia hiezaka hanao izay tratrako aza aho. Ianao no namerina ahy indray hitovy zo amin’ny olombelona rehetra toa ahy, nanome fitafiana, nanome sakafo, nanome haingo. Tena ny fahatsoranao rehetra mihitsy no nomenao ahy.
-	Adidy tokony hataoko aminao rahateo izany noho ny razana iombonana sy ny rà iraisana. Samy MALAGASY anie isika ry IALY e !- Kanefa rehefa vitako avokoa izay tokony nataoko taminao, dia hangata –dalana aho , ary voatery hisaraka eto isika !
-	Sedy a! Toa tsy ho afa –po aho raha handao anao sahady na hilaozanao!
-	Ka inona intsony moa no azontsika hatao ry IALY ? Izaho tsy maintsy hody hamonjy ny asako. Tsy afaka hifampiriaria etỳ foana isika, fa ny andro efa manomboka ho atoandro.
-	Sedy a! Mihafahafa loatra ianao ! Satria Traboina ve aho dia matahotra ianao fa sao soketain’ny tantara ho Mpanararaotra ? Tsia ry Sedy a ! Tsy Traboina intsony anie aho fa efa novonjenao e ! kanefa…
-	Kanefa ahoana ry IALY ?
-	Kanefa , rehefa namonjy ahy ihany ianao, dia vonjeo hatramin’ny farany aho !
-	IALY a ! Mitovy eritreritra isika, fa menatra anao aho !
-	Satria… efa voafatotra angaha ianao ry Sedy ?
-	Tsy mbola voafatototra aho ! Nefa tokony ho nambarako anao efa hatrany am –piadohana fa : “TIA ANAO AHO !”.
-	Tsy mbola tara akory ianao satria, tsy aiza anie aho fa eto an –tananao ihany e! ianao no nananako ireto zavatra mamirapiratra ihaingoako ireto ! Ianao no nikarakara ahy ! Ianao anie ry Sedy no naha toy izao ahy e! ka tsy tokony hioty ny vokatry ny fisasaranao ve ianao ? Sa ahoana ?
-	Tokony tokoa rahavako, raha ekentsika ho vavolombelona izao minitra izao, ary ny tantara no porofo tsy azo lavina. IALY a !
-	Ahoana izay ry Sedy ?
-	Tsy mampaninona anao ve ny mbola hamerenako indray mandeha hoe : “TIAKO IANAO ?”
-	Sitrako foana izany na im –pito aza, rahavako; Satriko foana satria nifankatia mangina tanaty rivo –doza isika.
Noraisiko ny loha –rantsany dia nofihininy mafy ny tanako; Nifampitantana izahay namonjy ny toerana nisy ny fiara. Navotsitro tampoka ny tanany fa naneno ny telefaonina teny amiko.
-	Azafady vativety fotsiny fa misy miantso ahy izany !
-	Avy any am –piasàna ?
-	Tsy haiko mihitsy !
-	Allô ! Salama tsara tompoko ô !
-	Ka inona no tokony hataontsika Rasedy a ?
-	Aleo angamba tsy hiasa mihitsy aloha e !
-	Ka tokony hanao ny fanamboarana navelan’ity rivo –doza ity mihitsy aloha, raha mba ho lasa androany ihany tokoa izy. Nandalo tany am –piasàna mihitsy aho io maraina io, fa bebe ihany ny zavatra simba ao !
-	Bebe ahoana Rasedy a ?
-	Misy varavarankely nongotan’ny rivotra ao, ny zoron –drindrina mifanila amin’ny arabe koa nihotsaka, ary ilay tafo tamin’ny ilany antsinanana iny aza nipiaka daholo. Izany rehetra izany anie no mbola harenina e!
-	Ka hiakatra any izany ise izao ?
-	Ny hariva mihitsy aho vao afaka handalo fa misy zavatra sasantsasany tsy maintsy halamiko any an –trano, izao maraina izao: momba ny fanafarana entana sasantsasany ilain’ny Mpanjifa, momba ny solika hivezivezena ho an’ny Mpiasa, ary indrindra , mikasika ny fitokonan’ireo Mpiasantsika any Vatomandry. Sady misalasala koa aho anie e!
-	Inona no mampisalasala an’ise ?
-	Ka raha tena hosoloina tokoa i TSETIKO, ka tsy hitantana ny any Vatomandry intsony, araka ny fangatahan’ny Mpiasa , dia hivotsitra daholo ihany koa ireo fifanarahana vitany tamin’ireo tera –tany vahiny nifandray taminy, avy any Amerika.
-	Ka ataovy tsara fotsiny ny fitantanan’ise e! Alamino miandalana aloha ny zavatra rehetra. Fa tokony hidina any Vatomandry fotsiny ise amin’ny herinandro, hifampidinika amin’ireo Mpiasa ireo.
-	Aleo fa ho hita eo ihany izay tokony hatao e ! Tsy maintsy handalo any aminao koa aho androany, fa misy hevitra sasantsasany hifanapahana, amin’ny maha –tompon’orinasa anao.
-	Fa aiza moa ise izao e ?
-	Eto Analakaely aho ! Avy nifampiraharaha tamin’ilay vazaha nandalo tamin’ny herinandro iny, fa handeha hiverina hody any Frantsa izy ka nametrapetraka tamiko ny endriky ny fiaraha –miasa amin’ireo solon –tenany eto Madagasikara.
-	Eny àry, fa dia rahariva izany e !
-	Mandra –pihaona e! Misaotra indrindra niantso !
-	Fa iza izany ? Hoy IALY nitehina ny soroko indray.
-	Tompon’ny orinasa tatanako.
-	Hay !
Novelomiko ny fiara, ary nentiko tany an –trano IALY, araka ny fangatahany. Natorotoroko azy daholo ny endriky ny trano amin’ny ankapobeny.
-	Ato no efitra fandriana ! Hoy aho nitantana azy hipetraka teo ambony seza; Dia itsy ilany itsy no efitra fikarakaràna sakafo; Irony ivelany tazanao irony no toeram –pidiovana, ary ny olona mipetraka ato ambonintsika ato no tompon –trano. Aza mihafahafa fa io ny radio ! Io ny Télé.
-	Ary itsy no inona ry Sedy ?
-	Solosaina io !
-	‘Ty hoe : “Ordinatera?”
-	Izy indrindra !
-	Ka ataonao inona ato an –trano io ?
-	Ilaiko amin’ny asa io ry IALY a ! Manampy ahy be dia be amin’ny fahasahiranako mihitsy io: ny amin’ny fitaherizana sy ny kajikajy maro isan –karazany.
Nitombo tamin’ny fifankatiavana izahay sy IALY , fa samy tsy misy namisavisa fampakarana sy fanambadiana, na izaho na izy. Enim –bolana no niarahany nipetraka tamiko. Ary rivo –doza tahaka izao indrindra no nisy olona nandondòna vao maizimaizina tao aminay. Ny “Ikalasoa a! Kalasoa a!”, tsy nisy farany intsony tao am –baravarana.
-	Ianao angaha no antsoiny hoe : “Ikalasoa ?”, Hoy aho nanala ny sandriko niondanan’IALY tao am –pandriana.
-	“Ikalasoa” no fiantsoan’ny fianakaviako ahy ka izany no mba niadiako varotra ny hiantsoanao ahy hoe : “IALY, satria tsy te –hahatsiaro ny zavatra taloha aho ! Hoy ny bitsibitsiny teo am –poto –tsofiko. Nefa…
-	Nefa ahoana akia ?
-	Nefa toa tena feon’i Nenitoa mihitsy izany reko izany. I Nenitoa ilay niasàko taloha !
-	Ilay nandehananao nitsoaka ?
-	Izy indrindra ka ! ka ahoana no ataontsika ry Sedy? Hafeninao aho sa …?
-	IALY a! Tiako Ianao! Ary tsy foiko ! kanefa sarotra amiko ny hanafina anao satria na isika aza anie tsy misy mahalala izay hitadiavany anao e !
-	Kanefa fantatro fa tsy maintsy haka ahy handeha hody ny anton –diany… tsy ho any intsony aho ry Sedy a! Tsy ho any intsony mihitsy aho ! Sambatra anie aho eto anilanao e! Fitiavana mamy mandrakariva no hitako aminao na hivoaka ny trano ianao, na mody avy miasa ! …Sedy a !
-	Ahoana izay rahavako ?
-	Ataoko ahona ny hamoy izao fiainana feno fahasambarana izao ?
-	Raha sanatria izao ny ora mangidy tsy maintsy hisomparana antsika ry IALY, dia mianiana aho fa tsy hanadino anao, ary tsy hanambady, tsy hanambady aho raha tsy ianao no ho vadiko. Ny zanatsika ry IALY A ! Ny zanatsika : “tandremo !!!”.
Nitomany izy, nifokofoko teo an –tendako teo, ary nosintoniny indray ny sandriko ka niondanany, ary nofihininy mafy ny valahako. Onena azy mafy aho tamin’izay fotoana izay, ka nirotsaka tsy tana koa ny ranomasoko, saingy tsy nataoko fantany fa nitomany aho. Nasadiakako teo amin’ny tendany ny tanako ilany ary nanoroka azy farany aho. Nakipako ny lamba dia niarina moramora aho.
-	Ho aiza ianao ry Sedy ?
-	Eo ihany ianao, fa handeha hamoha izao olona manakotrokotroka varavarana izao aho.
Vao nivoha ny varavarana, dia ny haka an’IALY tokoa no anton-dian’ireo vahiny; Ary tsy diso ny eritreritr’IALY , fa tena ny Nenitoany marina. Tsy azo nahodina mihitsy ny sainy na ahoana na ahoana nandreseko lahatra azy, “IALY” ihany, “IALY” foana, no nosokiriny : “Mila an’ IKALASOA mody izahay !” Hoy ny hiakany.
Nareniko moramora avy eo am –pandriana IALY, ary nasaiko nihomana, fa izaho kosa nandamina ny fitafiany rehetra tao anatin’ilay valizy fitondràko entana rehefa handeha alavitra. Mba nanaiky ny hanaterako azy tamin’ny fiara ny Nenitoany: IALY teo aloha nifanila tamiko, izy mirahalahy kosa tao aoriana.
Nangidy taminay ny fisarahana, ary tsy mbola mety ho zakan’ny saiko mandrakizao ny mieritreritra izay ranomason’IALY nipatrapatraka toy ny oram –baratra , nidina ny fiara nanaterako azy izay. Hay ny Dadany no niandry azy teo, ka nitondra azy teo no ho eo ihany hamonjy fiara ho any ANTSIRANANA, hono.
Izay no nahalasa saina ahy teo am –pijoroana teo hoe : “Rivo –doza tahaka izao indrindra no nisaraka tsy fidiny izahay sy IALY: roa volana ny kibony tamin’izay !”.
Samy niditra daholo indray ny mpandeha fa afaka tao anaty fotaka ny fiara, velona ny môtera, nitohy indray koa ny koranan’ny mpandeha.
-	Ary itony lalana itony ve izany dia tsy mba misy fanamboarana mihitsy e ? Hoy ry zalahy, teo akaikiko.
-	Ka lalana fitadiavam –bola anie itony e ! Hoy aho tsy rototra.
-	Fitadiavam – bola ahoana moa no tianao hotenenina ?
-	Misy sokajin’olona vitsivitsy no mahazo tombon–tsoa amin’ity faritra AMBATOMANOINA, BERONONO, AMBOHIBARY, ANTANETIBE, ANALAROA sy AMBOHIMIRARY ity; Dia ezahin’ireo sokajy vitsy ireo izay hanidiana antsika atỳ fa mahita lalana amin’izany izy. Satria raha vita tsara io lalana io, dia tsarovy fa tsy haharaka fifaninanana intsony ireo fa ho avy daholo ny vahiny sy ny Mpanam –bola avy any ivelany, ka sahy lafo amin’ny vidim –bokatra, ary hanana ny lanjany amin’izay ny VARY sy ny MANGAHAZO ary ny KATSAKA aty amintsika aty. Tena mino aho fa mety ho ny ankamaroan’ny Tantsahantsika amin’izay fotoana izay, no hanana fiara hitaterany ny vokatry ny taniny hanerana an’i MADAGASIKARA.
-	Ary ohatry ny Hoe amboarina anie izy ity izao e !
-	Misy manamboatra mihitsy any fa ala safay e! Miverena ianao eo amin’io toerana nanitsoka antsika teo io, raha avy taona toy izao, fa mbola eo ihany ny fiara hitondra anao, no handany adiny roa sy adiny telo, hiady tany sy hanototra apombo.
Mpandehandeha aho ary mahatsikaritra , fa iny lalana miala eo TALATA VOLONONDRY mianavaratra mihazo an’AMBATOMANOINA sy ANTANETIBE iny angamba no anisan’ny lalana tsy mba nisy fivoarana indrindra teto Madagasikara, kanefa dia lalana mampitohy Kaominina efa ho folo latsaka kely? Jerena avy ao ANJOZOROBE mihazo an’ I BETATAO, ka vita tsara ny lalana, na dia mbola lalan –tany ihany aza hatramin’izao, toy izany koa AMBOASARY sy ny sisa.
Dia alaim –panahy ny tena indraindray hizara tsiny amin’ireo mody maty hoe : “iza no tsy mandray ny andraikiny : ny Mpitondra tompon-tanàna sa ny Mpitondra foibe ?” fa tato anatin’ny dimampolo taona, hoy ireo efa antitra tamin’iny lalana iny, tato anatin’ny dimampolo taona dia toy izao foana no niainan’ny vahoka madinika.
Tamin’ny telo folakandro izahay vao tafakatra teo an –tanànan’i SADABE, ny orana tamin’izany, nijojo, nijojo tsisy farany.
-	Andao aloha hisakafo any amin’ny Hôtely any ry Sedy a ! Hoy ilay Mpitarika ny Delegasiônina niantso ahy.
Vao nanomboka nisakafo izahay dia nitsahatra ihany koa ny orana, ary efa nisy sombin’andro kely aza efa nanandrana nipoaka.
Vita ny sakafo dia niakatra indray ny mpandeha. Nizotra namakivaky ny tanàna ny fiara nitondra anay.
-	Fa inona indray ity hijanonana e ? Hoy ilay Ramatoabe.
-	Misy sakan’orana, hono, e ! Hoy ilay avy nitsirika teo amin’ny sisin’ny fiara.
-	Sakan’orana inona r’Ilaikely ity ?
-	Misy sakana mihidy io, ary tsy azo vohaina mihitsy raha avy be foana toy izao ny orana.
-	Ka hatory eto izany ? Hoy aho, nalaina dia nalaina.
-	Ary afaka ho aiza intsony moa ? Eto no misakafo dia eto no matory.
-	Eto anaty fiara eto ?
-	Ka tsy misy tranontsika aty anaka a! Hoy ilay Ramatoa be nisafosafo ny lohako indray.
Dia nanorina teo tokoa izahay ny alin’iny, niverina nisakafo indray mandeha tao amin’ilay Hôtely indray, ary nandry tamin’ny moka sy ny fanala teo amoron –dalana teo.
Nanatona ahy ny namanay iray nony naraina ny andro.
-	Sao dia tokony handeha an –tongotra isika ry Sedy a ?
-	Fa ahoana ilay sakana, angaha tsy nivaha mihitsy ?
-	Mbola ao hatramin’izao.
-	Ka hivaha anie io amin’ny sivy e! Izay no nolazainy omaly.
-	ô ry Sedy a ! Rahampitso anie ity fivoriana hovonjentsika e! sady mbola any Beronono fa tsy hoe atsy Ambatomanoina !
-	Ka tsy ho vitako kosa aloha raha handeha an –tongotra mpahatonga any e ! tena tsy zakan’ny aiko.
-	Mandeha moramora eny e!
-	Aleo handrasana mihitsy aloha ry zalahy ka !
Dia samy nihodikodina tany an –tanàna tany. Tanàna sady tsy filalaovana no tsy fiantsenàna, nefa voatery tsy maintsy nandriana. Vetivety teo dia vory daholo, ary akory ny hafaliana fa nivaha ny sakana. Kanjo, gaga lavitra boho izany aho , raha ny fiara voahidy taorianay no namelona môtera sy nisongona tsimoramora, dia lasa tanteraka.
-	fa ahoana ny fandehan’izy ity leiretsy a ? Hoy aho, hendratra dia hendratra.
-	Afaka fahefatr’adiny indray, hono, vao mahazo mandeha e!
-	Ka naninona no tsy isika no nandeha fa ry zalahy taoriana indray ?
-	Toa hoe, mbola tsy masaka angaha ny sakafon’ny Mpamily ?
Nandrasana izay ho ampahefatr’adiny, antsasak’adiny, adiny iray…, fa tsy mbola nandrenesam –peo hoe : “handeha”. Nidina aho nony farany.
-	Anontanio ny Mpamily, na handeha izy, na tsy handeha !
-	Fa angaha, tsy loza ry Sedy a !
-	Ny ondany no nataony avo be ao, dia nahazo fandriana mihitsy izy.
-	Ka tsy handeha izany ?
-	Izy,hono, tsy hiala eto raha tsy efa maina ny lalana !
Misy hevi –teny iray tsy mbola nazava tamiko, fa azoko haika izy teto; Izao ilay izy : “Sikidy mila voatsihary, ka mampandihy ny marary.” Na ianao mieritreritra, aza, vaninandro fahafiry aorian’ny fandalovan’ny rivo –doza tahaka izao ianao, vao hahita lalana maina, nefa dia izao fotaka mandrevo be izao daholo izay jeren’ny masonao ?
Izany no fihetsika nandona ny hambom –poko, ka nahatapa –kevitra ahy handeha an –tongotra hamakivaky ny sivifolo kilaometatra, ary tsy maintsy vita.
-	Andraso vetivety àry aho hanala kiraro sy haka ny entako dia aleo mandeha an –tongotra.
Nijojo indray ny orana, niha –mafy koa ny dia. Tamin’izany no nahitàko voalohany hoe: “ny lamba lena eny an –koditra, dia maina eny an –koditra ihany.”
-	Izao no tena fitolomana ry Sedy a ! raha tsy manao izao isika dia tsy mba hisy fisokafany mihitsy iny faritra iny ! Hoy ilay avy Miaramila.
-	Sady anjakazakan’ny Mpanankarena foana koa raha tsy sahy manafay azy ohatr’izao e ! Aiza ve ka ianao “gisalahy mangala –ketsa indray no avo vava !?”
-	Fay haika izy amin’izao ka ! Tsapany tsara fa tsy miteny intsony ny vola. Ireny mantsy no olona tsy mba nahita FAHAMARINANA hatramin’izay niainany !
-	Sady mila olona sahy mijoro sy mandray andraikitra toa antsika izao koa ny Tanàna e! Olona sahy mitolona, tsy manaiky lembenana!
-	Ianao aza anie ry Sedy, azo lazaina hoe manana fandavan –tena ihany e!
-	Fa ahoana no mahatonga anao hiteny izany ?
-	Ka mahavita manary fotoana sy manary asa, sady mbola mandeha an –tongotra hihevitra izao fivoriana izao ho fampandrosoana ny Tanàna.
-	Tsy dia zava –dehibe avokoa izany rehetra izany raha manoloana ny fitiavako ny tanindrazako.
Tamin’ny valo ora alina izahay vao tafakatra ny tanànan’Ambatomanoina, raha niala tany Sadabe tamin’ny iraika ambinifolo ora atoandro. Nandry teo aloha ny alin’iny, sady efa valaka dia valaka. Niainga indray ny maraina ary tany BERONONO vao nijanona.
Vao tonga aho dia nanatona tao an trano IANTSO.
-	Arahabaina aloha fa tonga soa aman –tsara eto an –tanàna e !
-	Miarahaba anareo tratra soa ihany koa r’ise a ! Sady miarahaba anareo nahatratra soa aman –tsara izao taom –baovao izao, fa mbola tsy hary nihaona anie isika e !
-	Dia samy hahatratra ny ho avy daholo , no mba hirariana e !
-	Ka ahoana ? Inona no vaovao ?
-	Hay ve ise ka tonga ihany e! Hoy IANTSO nibanjina tsara ny endriko.
-	Fa ahoana moa ?
-	Izany no malaza eto an –tanàna hoe : “leo politika, hono, ise, dia leo monina, ary misy aza sahy milaza mihitsy hoe : “sesin –tany.”
-	Efa ho adala ny olona ry IANTSO a ! Tanindrazako anie ity e ! Sady efa nanolorako tena. Tokony ho fantatry ny olona hofidiana, fa mety ho lanim –bahoaka izy, nefa mety tsy ho lany koa. Ny zavatra mahavoafitaka mantsy indraindray , raha manao kajikajy ara –barotra ny olona , dia noho ny fiheverany mandrakariva fa tsy maintsy hahazo tombony izy, ka manao be famaritra. Fa tokony ho fantany koa, na tokony hoheveriny milahatra amin’izany, fa “tsy maintsy ho faty antoka izy”. Raha talohan’ny nilatsahako dia efa nino aho fa mety hadresy ary mety ho resy. Fa noho ny asako any Antananarivo no tsy ivezivezeko intsony, fa tsy hoe “LEO AHO!”. Raha leo aho anie dia leo anareo e! kanefa , iza moa fa tsy ise indrindra no namako tsy mahafoy ahy eto an –tanàna ? Ary raha ny hoe : fahatongavako, dia tsy maintsy mijoro izahay fa sao handihizan’ny vorondolo ny tanàna.
-	Ka aiza àry izay voandalana e ? Hoy izy somary nitsiky kely izay.
-	Lasan’ny rivo –doza daholo r’ise a !
Niara –nihomehy izahay sy IANTSO dia nangata –dalana nody izy sady nampandroso an –trano. Izaho koa naka torimaso kely mihitsy aloha fa drodroky ny lalan –davitra.
-	Misaotra anareo nandao tokantrano,nandao asa aman –draharaha ao anatin’izao fotoam – panetsàna izao; tsy noheverinareo ho inona akory ny sakan’ny rivo –doza tahaka izao, fa tonga ianareo midodododo, tonga ianareo mihazakazaka, noho ny fitiavana izao Kaominina malalantsika izao. Fa misaotra manokana an’i Sedy isika, noho ny fandavan –tena lehibe nananany; ka nanariany ny asany sy nikirizany avy any Antananarivo mpahatonga tatỳ, na dia nandeha an –tongotra tamin’iny lalan –davitra iny aza. Izany no tena midika fa tiany tokoa ity faritra ity., ka na dia any alavitra sy any an –drenivohitra any aza izy, , dia tsy manadino antsika fa izao tonga soa aman –tsara eto anatrehantsika izao. Ny mba irariana dia enga anie hitohy hatrany izao fiaraha –miasantsika izao. Ary noho izany indrindra , dia mangataka an’i Sedy isika mba hitondra fitenenana kely na dia indraim – bava fotsiny aza; Hoy ny lahatenin’ny ben’ny Tanàna.
Noraisiko ny fitenenana.
-	Fifaliana lehibe ho anay ny miarahaba anareo rehetra , nahatratra izao vaninandro lehibe eo amin’ny tantaran’ny faritra izao, nahatratra ihany koa ity taona vaovao ity, ary indrindra miarahaba antsika rehetra tsy maty fo aman’aina noho ny fandalovan’ny rivo –doza tahaka izao. Matoa izahay tonga eto dia haneho ny fiaraha –miasa, hitondra ny fahavononana hampandroso sy hampivoatra izao faritra izao; ary indrindra indrindra, tsy hiamboho adidy amin’ny maha –Mpanolotsaina anay. Izahay hanapaka, fa ianareo kosa hanatanteraka, ary noho izany indrindra no itondràna hafatra ho an’Andriamatoa Ben’ny Tanàna sy ianareo Birao Mpanatanteraka, fa sao re tompoko…, aleo sanatriavina ihany, sao sanatrian’izany ka ny zavatra izay tapahinay eto, hataonareo tanisa sy havadibadika fotsiny, ka hanjary hizara ny lalana. Fa vonona ny hiara –miasa aminareo aho, kanefa tsipihiko tsara fa “tsy mahalala n’inona n’inona afa-tsy FAMPANDROSOANA aho”.
Nizotra teny ny fivoriana ary naharitra andro maromaro ihany. Samy tsy dia nisy dodona ny hody loatra noho ny rotsak’orana sy ny fiakaran’ny rano amin’ny rivo –doza tahaka izao. Nanomboka hifarana ny fivoriana, lasa koa ilay rivo – doza ary efa maina indroandroa andro ny tany tamin’izay; Efa azo nantenaina ny lalana, noeritreretina ihany koa ny fiara hitondra ahy hiverina ho atỳ Antananarivo.
-	Toa nanala Mpiasa iray, hono, ianao nandritra iny fivoriana nataonareo iny ? Hoy IANTSO, sady notazoniny hiresaka teo afovoan’arabe teo aho.
-	Iza no nilaza izany ?
-	Malaza be eto an –tanàna izany ! Ny namanareo isaky ny avy mivory dia mamory vahoaka any Avaratsena na eny Andrefantsena, dia ianao foana no ataony resaka hoe : “tena ratsy saina i Sedy fa noesoriny i Anona…”.
-	Ilay eto an –tanàna mihitsy r’ise no tsy fantatro a! tsy olona niara –niaina taminareo teto hatramin’izay moa aho ? Dia iza amin’ny eto an – tanàna indray no mbola tsy mahalala ny toetrako ? – Mety ho vitako ve izany hoy ise ?
-	Izaho koa aloha tsy nino hoe ise no hahavita izany e !
-	Tokony hisaina tsara ny olona vao manaiky zavatra iray. Amin’ny fanapahan –kevitra anatina fivoriana toy ireny ry IANTSO a ! dia misy dia misy tokoa ny atao hoe : “MARO AN’ISA”, ka ireo no basy! Izay lanin’ireo dia lany, fa izay tsy lanin’ireo dia any… Ny MARO AN’ISA anie no nanala azy tao e ! Ary inona moa no fahotàko amin’izany , raha nanohana ny maro an’isa aho satria mba naneho ny hevitro aho, ary tsy manana afa-tsy izaho irery ao anatin’io? Ny namany sy ny mpiara –niasa taminy anie no nanolotra azy teo anatrehako, hotsipahina e !
-	Ilay olona ihany koa r’ise ohatry ny tsy mieritreritra ihany indraindray a !
-	Ka ny valala misy, moa ny mpilaza koa mahay !
Ny zavatra mbola mahavariana ny saiko mandrakizao, dia ny fomba fijerin’ny olona amin’ny ankapobeny. Poa toa izay dia miova vetivety eo ny fandokoany ny zavatra iray ninoany ho tsara ka vasohany ho ratsy, ary misambotra ny ratsy aminy hatramin’izay izy, ka mino izany ho tsara. Miankina amina trangan –javatra na rivotra mitsoka eo amin’ny fiaraha– monina no maninteraka izany.
Saika namako avokoa ny ankamaroan’ny olona teo an – tanàna fony tsy mbola hita loko fa hitondra aho, dia samy niresaka sy nifamazivazy tamiko, na bodo, na adala. Vao niakatra teo amin’ny seza fifaninanana aho, dia lasa niahataka avokoa ny ankamaroan’izy rehetra, ary tsy nisy tavela afa-tsy ireo tsy afa –miala noho ny rohim – pihavanana na ny trosam –pifankatiavana hatry ny fony mbola zaza. Tsy manadiso an –dRAKAOSY aho, raha tsy mbola nivadika tamiko izy mandrakizao, satria sarobidy loatra ny fihavananay. Tsy mandiso an’i Zokilahy aho, raha manao tambitamby miaro felaka sy mitondra lela mamy amiko izy, satria seza iray no nifaninananay tamin’izany fotoana, ka na dia samy tsy nisy tonga teo amin’ny tanjona aza izahay mirahalahy mianaka, ny holatra navelan’ny “tsy an –kitsitsy” kosa, tsy maty ao am –pon’ny te –hitahiry.
Samy manana ny fomba fijeriny sy ny fandraisana zavatra ny olona; fa ho ahy, tsy mba seza no naniriako hiakatra teo amin’ny fitondràna, fa FAMPANDROSOANA, ary tsy nifanina tamina “tsangan’olona” aho, fa nitory fitiavan –tanindrazana tamin’ireo mpiray faritra tamiko. Mandrakizao anefa, dia mbola hitako milonjehitra ao BERONONO foana, ny takaitra navelan’iny fifidianana indray nitoraka iny, isaky ny mody mitsidika an’i Dada sy i Mama aho, ka midina mamakivaky tanàna, mamangy an-dry LIDY anabaviko.
Nandao an’I BERONONO aho ary nihazo an’Antananarivo indray ,namonjy ny asako. Nandamina zavatra sasantsasany noho ny fiovan’asa tampoka tsy maintsy natrehako aho ary niverina indray tamin’ny andavandro mahazatra.
Vao tafaverina kelikely teto Antananarivo aho, dia sendra rivo –doza hafa indray: GAFILO ! GAFILO ! tsisy farany intsony eraky ny arabe sy ny elakelan –trano. Tsy nanampo aho tamin’ny voalohany fa noheveriko hoe: “gafìny ! gafìny ! Hay izy ity ka GAFILO. Efa oram –baratra tsy nisy nivoahana an –trano vao fantatro hoe : “RIVO –DOZA”, orana izao ! Rivotra…! Apetrakao eo am –baravarana ny fatana arehitra, poa toy izay dia milelalela sy mena midorehitra ny arina.
-	Mba hialoka kely ato aminao izahay fa dia lena loatra ! Hoy ilay ramatoa nitantana an –janany niditra ny birao fiasàko manamorina ny arabe.
Izaho moa tsy dia nandinika azy fa sady nanohy ny asako ihany, no mamaly resaka aminy eo.
-	Mipetrapetraha eo amin’ny seza fa ianareo aza mba mampalahelo ko ! Maro loatra koa ny rivo –doza nisesy tato ho ato izay ! Sady any amin’ilay solosaina ihany ny masoko.
-	Sady ity tena migafy araka ny anarany mihitsy ! tany Antsiranana izao, olona telopolo mahery no indray lasany ! Omby an –jatony ! Soa ihany izahay fa efa tafakatra tatỳ.
-	Mampalahelo mihitsy ho aho ny mahazo ireo traboina manerana ny Nosy.
-	Hay ato amin’ny Biraonao koa misy ity… Solosaina moa ? Hoy ilay ramatoa somary nitsatsaingoka.
-	Misy ato ka ! Tany amin’ny nalehanareo tany koa angaha nisy ?
Nihankahana ilay Ramatoa, tsy niteny, tsy nivolana fa namela minitra iray tanaty fahanginana tanteraka. Noheveriko fa tsy naheno izy ka tsy notohizako intsony ny resaka.
-	Eny ! Hoy izy nony elaela, sady nitsangana nangata –dalana izy fa efa nitsahatsahatra ny orana tamin’izay.
Nentiny indray ilay zanany dia lasa izy mianaka kely nanohy ny diany. Efa lasa nivoaka izy vao liana ny handinika ilay Ramatoa sy ny mombamomba azy aho: Ny feony dia feo tsy dia lavitra loatra ny sofiko fa efa fandreko matetitetika !
-	Tena efa nisy fotoana nifampiresahako tamin’izany olona izany mihitsy e! Hoy aho niteny irery sady nidoboka ny latabatro tao amin’ny birao.
Tsy haiko na nalaim –panahy aho na sendra fifandrifian –javatra mihitsy, fa izao niverina tarỳ amin’ny fito taona lasa tarỳ izo fotsiny. Taitaitra tampoka teo am –pitoerana teo ny saiko.
-	Rivo –doza tahaka izao…! Hoy aho niteny irery. Rivo –doza tahaka izao koa no ohatry ny nandrenesako feo tahaka izany; Feon’iza anefa ? Toa… feon’IALY ? tena feon’IALY mihitsy !
-	“ Nefa mbola mahazo mangataka zavatra iray aminao aho ve? Hoy izy tamin’izay, sady tsinjoko mbola nihafihafy sy menamenatra be nihany.
-	Inona izay ry IALY ? Hoy aho nitsiky malefaka taminy.
-	Ny anaranao ! Mba tiako ho fantatra ! Mba tiako hotononina, tiako ho vita sikotra ato anatiko ny endrikao sy ny anaranao, fa nanao soa be loatra tamiko ianao ! Hoy izy tamin’ilay endrika efa nanomboka ho safotry ny hasambarana sahady. Tadidiko tsara fa tsy afa –po mihitsy izy raha tsy nasaiko niantso ahy hoe: “SEDY”.
-	Manina an’IALY aho izany ! Hoy aho nitsangana mihitsy teo amin’ny seza nitoerako, ary nanara –maso teo amin’ny varavaran –kely, izay tondro nizorany; nefa efa tsy tsinjoko intsony na nianatsimo izy mianaka, na nianavaratra. Tena IALY mihitsy iny rangahy a! Hoy indray aho nidobodoboka ny tolàm –baravarambe tamin’ny felan –tanako havanana. IALY mihitsy iny ! Ny feon’IALY no mitovy an’izany !
Nangina vetivety fotsiny aho , dia mbola nasavoritaky ny saiko indray.
-	Nefa raha IALY iny, inona no tsy niantsoany fa i “SEDY” aho ? Inona no tsy nitsorany fa “zanakay iny nentiny iny?” Sa hadinony aho ? – Tena tsy IALY indray iny fa olon –kafa ka ! Olona mahafantatra ahy tsara mihitsy matoa sahy nivily nialoka tato amin’ny biraoko. Nefa mampieritreritra ahy ilay fanontaniany hoe : “ hay ato amin’ny biraonao koa misy ity:.. Solosaina moa ?”. Tany an –trano mantsy no nahitan’IALY ohatra an’io, ary izaho mihitsy no nampianatra azy niteny hoe : “SOLOSAINA” fa ôrdinatera no firesaky ny olona taminy, fony mbola tsy nahita endrika izany izy. – Dia ilay tany an –trano ve no tadidiny e ? tena IALY mihitsy iny e! Aoka fa IALY iny ! Aleo aho hody fa sao dia lasa niandry ahy any an –trano izy mianaka, ka hotsaka ao an –tokontany ao.
Nidiako ny biraoko, ary najanoko izay asa tsy vita tao. Namelona fiara aho, dia nihazo ny lalana nody. Akory anefa ny havizanako fa mbola varavarana nihidy ihany no nitsena ahy toy ny isan’andro. Nojereko avokoa tany an –damosin’ny trano fa tsy nisy nialoka, niakatra tao amin’ny tompon –trano aho, nefa tsy nisy nitady ahy, hono, teo. Izay aho vao nionona tanteraka fa tsy IALY iny tao amin’ny biraoko iny: olona nitovy feo taminy fotsiny ka nanaitra ny fahatsiarovako. Nandry aho ny alin’iny, fa tsy nahasakana ny saiko ny hametso an’IALY ny torimasoko
IALY! IALISOA! Aiza re ianao izay e ? mampahatsiaro ahy zavatra maro ny rivo –doza tahaka izao !!! Hoy aho nikoso –maso teo am –pamalonana ny lamba notafiako ny maraina, sady niverina nitorovoka teo am –parafara indray : teo amin’ilay namihinan’IALY ahy indrindra.
Toy ny azon’aretina aho nanomboka teo, fa toa hahitako azy daholo izay rehetra jereko, nefa tsy nisy n’iza n’iza. Vohaiko ny varavarana hitazanako izay olona ho avy, kanefa akaton’ny rivo –doza foana no sasatra : vohaiko ka gafìny! Vohaiko ka gafìny ! – ‘ty koa tena GAFILO marina ! Hoy aho, nanidy ny tranoko sady namonjy ny toeram –piasàko.
-	Sao dia mba misy elo azo hindramina, hono, ato aminao tompoko ô ? Hoy ilay zazalahy kely somary nirokiroky hafahafa, nijaridina teo am –baravaran’ny Biraoko.
-	Fa angaha ise tsy mba nampianarina miarahaba olona ? Hoy aho nanambitamby azy, sady nanatona ihany. – Avia aloha miarahaba e !
-	Ka izaho anie mbola tsy mianatra e! Hoy izy sady nanatona nandray ny tanako
-	Iza no naniraka an’ise ?
-	I Neninay !
-	Fa avy aiza ianareo ?
-	Niboaka avy ao Antsiranana !
-	Ary aiza Iabanareo ?
-	Eto Antananarivo eto, hoy i Neny fa mbola tsa hitako.
-	Ianareo angaha ilay nialoka orana teto omaly ?
-	Eka !
-	Ary aiza i Nenin’ise izany ?
-	Mandeha Aotomôbilina kely mavomavo io izahay, dia miandry ao izy sy ny saofera.
-	Ka ahoana ny fanateranareo ny eloko ?
-	Handalo eo, hono, izahay rahariva.
Nomeko azy ilay elo fiandry niantona teo ambadiky ny varavarana, ary lasa tany izy. Valalanina ny saiko fa toa nino bebe kokoa indray aho fa IALY mihitsy iny olona omaly iny, ary ao an –tokontany ao izy izao no miandry an –janany!
-	Diso ihany aho! Hoy ny eritreritro. Tokony ho nadiniko tamin’iny zaza iny izay anaran – dReniny mba hahalalako ny marina; Ilay zaza anefa efa lasa any amin’izay naniraka azy any. – IALY mihitsy iny rangahy a! Hoy ny fanizingizinako ny hevitro. Nefa na izy aza iny, toa tsy ho tadidiko intsony ny endriny. Fito taona mantsy izay ! Fito taona nisarahana : rivo –doza tahaka izao mihitsy no nandrombahana azy teto an –tsandriko. Tena latsaka lalina amin’ny alaheloko an’IALY aho !!!
Nangina tampoka toy ny sosoa voatapo –drano izany rehetra izany, fa ity ilay zaza niverina sady notantanan-dReniny avy eo an –kavia. Diso ny eritreritro raha nihevitra azy ho “ramatoa” aho hatry ny omaly, fa hay ka mbola tanora dia tanora ity izy. Vao avy ery alavitra ery izy dia nitsiky tamiko, nefa endrika tsy nety tafaverina tao an –tsaiko velively, nentin –kenamaso aho ka mba namaly tsiky ihany koa; Nefa na ny nitsikiany, na ny nitsikiako, dia samy tsy nisy fantatro ny antony.
-	Aleo fa safariako lavitra ity ! Hoy aho, dia tsy maintsy hiteny ny marina.
Vao tafiditra ny biraoko izy, dia namonjy niarahaba ary nitombina teo amin’ilay efa nitombenany omaly ihany. Izaho indray kosa, nitsangana dia nitanisa izao Babay sy Lohavohitra rehetra izao.
-	Miala tsiny indrindra, madama, raha somary nanadino kely: ohatry ny olona efa nifanerasera tamiko elaela ihany ianao, nefa tsy tsaroako hoe : tany PALESTINE sa tany TELAVIVE ?
-	Teto Madagasikara ihany ka ! Tsy tsaroinao mihitsy ve ? Hoy izy nitsiky tamiko.
-	Misy olona iray izay afangaroko amin’ny feonao, fa dia tsy misy ivoasana amin’izany firesakao izany mihitsy. Saingy tsy eto izy izao fa lasa nifindra any Antsiranana.
-	Ary tsy tsaroanao ve ny anarany ?
-	IALY ! Izay no fiantsoako azy, ary rivo –doza tahaka izao koa no nihaonanay voalohany teto Antananarivo, ary rivo –doza tahaka izao no nisarahanay sy nitondran –dRainy azy
Sokajy : fiainana
Daty : 12/07/2004
Mpamangy : 3275